Mpitandrina ny fahasoavan’Andriamanitra
"Ary satria samy manana fanomezam-pahasoavana samy hafa isika, araka ny fahasoavana izay nomena antsika: raha faminaniana, dia aoka hatao araka ny ohatry ny finoana"- Rôm. 12:6
Notendren'ny Tompontsika haneho taratra amin'izao tontolo izao ny fahafenoana sy ny fahatanterahana hitantsika ao Aminy ny fiangonany. Mandray tsy tapaka ny fahalalahan-tanan'Andriamanitra isika, ary rehefa mizara izany isika dia asaina maneho amin'izao tontolo izao ny fitiavana sy ny fahalalahan-tanan'i Kristy. Raha somebiseby ny lanitra manontolo mampiely ireo iraka manerana ny vohon'ny tany mba hampandroso ny asam-pamonjena dia tokony hiara-miasa amin'i Jesôsy Kristy ihany koa ny fiangonan'Ilay Andriamanitra velona. Mambra ao anatin'izany Tenany izany isika. Izy no loha izay mifehy ireo momba ny tena rehetra. Jesôsy mihitsy, ao amin'ny indrafony tsy manam-petra, no miasa ao amin'ny fon'olombelona sy manao fanovana ao amin'ny fanahy; mahatalanjona loatra izany ka na ireo anjely aza dia mijery azy amim-pahagagana sy amim-pifaliana. Hita eo amin'ny toetra sy ny fiainan'ireo tena mpanara-dia ny Tompo marina izany fitiavana tsy mihevitra ny tena izany, izay Toetrany. Irin'i Kristy ny hahatonga antsika hanana ny toetran'ny lanitra izay ao Aminy raha mbola eto amin'ity tontolo ity; amin'izay dia tsy hoe maneho ny voninahiny fotsiny isika mba hiderana an'Andriamanitra fa manazava ny haizina eto an-tany amin'ny famirapiratan ' ny lanitra. Amin' izany no hahatanterahan'ny tenin'i Kristy manao hoe: "Hianareo no fahazavan'izao tontolo izao."
"Fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay", "mpitandrina tsara ny fahasoavana maro samy hafa izay an 'Andriamanitra. " Ny fahalalana ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fahamarinan'ny Teniny ary koa ireo fanomezana ara nofo - ny fotoana sy izay azo ampiasaina rehetra, ny talenta sy ny hery miasa mangina- ireo rehetra ireo dia apetrak'Andriamanitra amintsika mba hampiasaina ho voninahiny sy ho famonjena ny hafa.
Na aiza na aiza no misy fandrisihan'ny fitiavana sy ny firaisam-po, na aiza na aiza no misy olona manatsotra tanana mba hanandratra ny hafa sy hitondra fitahiana ho azy, dia hita eo amin'izany ny fiasan'ny Fanahy Masin'Andriamanitra. (...) - RH, 24 Desambra 1908.
Telovolana 3: Ao amin'ny memy miaraka amin'i Kristy
Lesona 2: Fizahan-toetra maro samihafa
Fahoriana mahatonga fahamatorana
"Ary fandrao hirehareha noho ny habetsaky ny fanambarana aho, dia nasiana tsilo tamin'ny nofo, irak'i Satana hamely ahy, fandrao hirehereha aho." - 2 Kor. 12:7.
Tsy mitovy velively ny mikapa sy ny mandrantsana. Ny zava-maniry tsy ilaintsika intsony no kapaina, fa rantsanantsika kosa izay tiantsika hamokatra bebe kokoa. Kanefa samy mitaky ny fampiasana antsy maranitra ireo roa ireo. Eny tokoa, ampahany maro amin'ny zava-maniry no kapaina rehefa mandrantsana, ka ho an'ny mpanao zaridaina mpiana-draharaha dia toa famonoana ilay zava-maniry izany. Izao no nosoratan'i Bruce Wiklinson raha niresaka momba ny ara-panahy izy: "Fitahiana miavosa be ye no angatahinao amin'Andriamanitra? Maniry fatratra ny hitovy bebe kokoa amin'ny Zanany ve ianao? Raha eny ny valin-teninao, dia antsy izany no tadiavinao." - Bruce Wilkinson, Secret of the Vine, t. 60.
Maro no nametra-panontaniana ny amin'izay tena tian'i Paoly hambara amin'ny hoe "nasiana tsilo tamin'ny nofo" izy (2 Kor. 12:7). Misy ireo milaza fa ny famelezana tsy tapaka ataon'ireo fahavalo amin'i Paoly izany; ny sasany indray mihevitra fa nanana fahasarotana teo amin'ny fitenenana i Paoly. Raha ny marina dia olanateo amin' ny mason' i Paoly ilay izy (Jereo ny fanazavan'i Ellen G. White, SDABC, b. 6, t. 1107). Mahagaga, nino i Paoly fa «nasiana tsilo» izy. Inona araka ny hevitrao no tian'i Paoly hambara amin'ny hoe unasiana»? Iza no nanisy izany taminy? Ahoana no nampiasan' Andriamanitra izany ho tombontsoan'i Paoly? Mariho fa voafaritra tsara ny zava-nokendren'ilay «tsilon'i " Paoly: `fandrao hirehereha aho" hoy izy (2 Kor. 12:7). Tsy hoe nisy fahotana manokana vitany tsy akory, fa ny mba hiarovana azy tsy hanota any aoriana. Niaiky i Paoly fa nanana fironana sy fahalemena hanota, ka afaka hiaro azy amin'izany io "tsilon'io. "
Vakio ny 2 Kôr. 12:7-10. Ahoana no namahan'i Paoly ny olany tamin'ilay (tsnilon'ny). Raha ny hevitrao, nitondra tombontsoa ara-panahy hafa ho an'i Paoly ve ny fahalemeny? Mety hisy tsilo ihany koa eny aminao; ahoana no anampian'ny fihetsik'i Paoly anao hahay hamaha ny kapanao koa?
Mety ho hafa tanteraka amin'ny fihevitrao ny hevitr'Andriamanitra ho fampitomboana ny ara-panahinao; amin'ny fomba ahoana? Saino ny amin'ireo lafim-piainanao izay mila mamokatra bebe kokoa ho amin'ny fahamarinana. Toetra ara-panahy manao ahoana no tianao hompitomboin'Andriamanitra ao anatinao amin'ny alalan'ny "fandrantsanany"?